Mpanamboatra andiany P3 | China P3 Series Factory
LOHATENY KEY 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell dia mampiasa teknolojia vaovao hanatsarana ny fahombiazan'ny modules, manome endrika hatsarana tsara kokoa, mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny fametrahana eo an-tampon-trano. Fahombiazana avo lenta Fahombiazan'ny fiovam-po maoderina (hatramin'ny 17,5%) tombony amin'ny teknolojia Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Ny fanoherana PID tsara dia tsara ny Anti-PID dia manome antoka ny fahasimban'ny herinaratra voafetra amin'ny famokarana betsaka. Low-mazava Performance Advanced fitaratra sy ny sela ambonin'ny textu ...
LOHATENY KEY 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell dia mampiasa teknolojia vaovao hanatsarana ny fahombiazan'ny modules, manome endrika hatsarana tsara kokoa, mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny fametrahana eo an-tampon-trano. Fahombiazana avo lenta Fahombiazan'ny fiovam-po maoderina (hatramin'ny 18%) tombony azo avy amin'ny teknolojia Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Ny fanoherana PID tsara dia tsara ny Anti-PID dia manome antoka ny fahasimban'ny herinaratra voafetra amin'ny famokarana betsaka. Low-light Performance Advanced fitaratra sy sela ambonin-tarehy ...
LOHATENY KEY 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell dia mampiasa teknolojia vaovao hanatsarana ny fahombiazan'ny modules, manome endrika hatsarana tsara kokoa, mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny fametrahana eo an-tampon-trano. Fahombiazana avo lenta Fahombiazan'ny fiovam-po maoderina (hatramin'ny 18.01%) tombony amin'ny teknolojia Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Ny fanoherana PID tsara dia tsara ny Anti-PID dia manome antoka ny fahasimban'ny herinaratra voafetra amin'ny famokarana betsaka. Low-hazavana Performance Advanced fitaratra sy ny sela ambonin'ny sela ...
LOHATENY KEY 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar solar cell dia mampiasa teknolojia vaovao hanatsarana ny fahombiazan'ny modules, manome endrika hatsarana tsara kokoa, mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny fametrahana eo an-tampon-trano. Fahombiazana avo lenta Fahombiazan'ny fiovam-po maoderina (hatramin'ny 17.93%) tombony amin'ny teknolojia Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Ny fanoherana PID tsara dia tsara ny Anti-PID dia manome antoka ny fahasimban'ny herinaratra voafetra amin'ny famokarana betsaka. Low-hazavana Performance Advanced fitaratra sy ambonin'ny texturin ...